DHAGEYSO Madaxweynaha Soomaaliya oo Muqdisho ku soo laabtay. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Madaxweynaha Soomaaliya oo Muqdisho ku soo laabtay.
Star FM July 11, 2018
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo, oo ka qeyb galay munaasabadii caleema saarka Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa maanta dib waxay ugu laabteen magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa markii uu caleemo saarka ka qayb galayay ka anba baxay dalka jabuuti halkaasi oo uu kaga qayb galay furitaanka Madasha Aaga Caalamiga ah ee Ganacsiga Xorta ah dalka Jabuuti, iyadoo ay munaasabaddaasi goobjoog ka ahaayeen Madaxweynayaasha dalalka, Jabuuti, Rwanda, Suudaan, iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya.
Shirka Iskaashiga Afrika iyo Shiinaha oo ka dhacay magaalada Jabuuti ee caasimada Jamhuuriyada Jabuuti ayaa ahaa mid looga gool lahaa sidii loo abuuri lahaa jawi ganacsi isku furan oo ka dhexeeya qaarada Africa iyo dalka Shiinaha.
Madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa magaalooyinka Jabuuti iyo Ankara waxa uu si gaar ah ula kulmay Madaxweynayaasha qaar ka mid ah dalalka Afrika iyo ka qeyb galayaal Caalami ah, waxa ayna ka wada hadleen danaha kala dhexeeya Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka ay Soomaaliya la leedahay dalalka kale ee aduunka.
Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa dalkaTurkiga loogu soo dhaweeyay hab-maamuus sare, isagoona ka mid ahaa 20 hoggaamiye oo ka qeyb galay caleema saarka Madaxweyne Rajab Tayib Ordogaan.
Wafdiga Madaxweynaha Soomaaliya waxaa ka mid ahaa Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah Cabdulqaadir Axmed Cabdi, Wasiirka Ganacsiga,Warshahadaha Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, Wasiiru Dowlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa iyo masuuliyiin kale.
Dhanka kale qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ee Caasimada dalka Soomaaliya ayaa soo dhawowo nidaamka cusub ee madaxweynaha Soomaaliya uu kula soconayo qaadista dacwadaha dalka Soomaaliyeed.
← Amina Maxamad oo loo qabtay 14 maalmood si ay uga jawaabto soo magacaabidda ku xigeenada maamulayaasha jaamacadaha
DHAGEYSO Barnaamijka Madasha, Qisooyinka 11-07-2018 →